U-Apple uthi ndlela-ntle kwiKhayaPod | IPhone iindaba
U-Apple uthi ndlela-ntle kwiPodPod yasekhaya
ULuis Padilla | 13/03/2021 11:12 | Ukuhlaziywa ukuba 13/03/2021 19:56 | IPod Home, Izaziso
Kwintshukumo emangalise wonke umntu, U-Apple uqinisekise nje ukuba isithethi esikumgangatho ophezulu, i-HomePod, iya kuyeka nje ukuba isitokhwe sangoku siphelelwe.
U-Apple usinike kusasa ekuseni ngalo Mgqibelo ngeendaba ezingalindelekanga ngokupheleleyo: ibhengeza ukuba iyarhoxisa iPod yasekhaya. Isithethi sokuqala esikrelekrele inkampani eyayisungule umva ngoJuni 2017, nangona ingazange iqale ukuthengiswa de kube nguJanuwari 2018, ayisayi kuphinda ifumaneke ukuze ithengwe kwiivenkile ezisemthethweni kwakamsinya nje ukuba isitokhwe esikhoyo kwiivenkile zeApple siphelelwe. Oko akuthethi ukuba ishiywe ngokupheleleyo, kuba iApple ibhengeze ukuba izakuqhubeka nohlaziyo lwayo. kunye nokuphuculwa kwenqanaba lesoftware.
1 IPod yasekhaya, enye ndiyifunayo kwaye andinako
2 Imoto yePod yasekhaya ikamva leApple
3 Mhlawumbi kungcono ukuqala ekuqaleni
IPod yasekhaya, enye ndiyifunayo kwaye andinako
Ukusukela ekuqaleni, i-HomePod ibibandakanyeka kwiimpikiswano zakudala zokuphehlelelwa kuka-Apple. Umgangatho ozwakalayo ngaphandle kwako nakuphi na ukuthandabuza, kodwa umncedisi onemiqobo emininzi kunye nexabiso eliphezulu, iphezulu kakhulu kuneemveliso esizifumana kukhuphiswano, ezinomgangatho wesandi osezantsi, ziyinyani, kodwa amanqaku ngakumbi kwinqanaba lesoftware. Nangona kunjalo, inkampani yaseCupertino iye yasiphucula isithethi sayo ngohlaziyo lwesoftware ebelinika amandla amatsha, nangona ihamba kancinci kunokuba bebefuna abasebenzisi. Ngapha koko, ukwamkelwa kwentetho akukabikho kwezinye iilwimi ngaphandle kwesiNgesi.
Kule nto kongezwe umda obaluleke kakhulu ekuqaleni ophawule umkhondo opheleleyo weKhayaPod. Ukuvalwa kwindalo ye-Apple kunciphise kakhulu abasebenzisi abanokufumana okuninzi kuyo. I-HomePod iqale ukuvalwa ngokupheleleyo kwiimveliso kunye neenkonzo ze-Apple, kwaye nangona ixesha lihambile kuvulwe ezinye iingcango, ezinje ngeenkonzo zomculo wesithathu, kwakhona ukucothisa ekuphuhlisweni kwezi zinto kuphele ngomonde wabasebenzisi abaninzi abangazange bayibone iPod yasekhaya njengenye indlela yokwenyani kwabanye iimveliso ezikhuphisanayo.
Imoto yePod yasekhaya ikamva leApple
U-Apple uthe bazogxila kuphuhliso lwe-MiniPod mini, Oko kukuthi, ayizilahli izithethi ezilungileyo, kwaye ezo ziindaba ezimnandi. "Umntakwabo" omncinci weKhayaPod unemisebenzi efanayo, nangona kunjalo inezibonelelo ezimbini ezenze ukuba ibe yimveliso enomdla ngakumbi kubasebenzisi. Eyokuqala yazo, ngaphandle kwamathandabuzo, ngamaxabiso ayo. Umgangatho wesandi kunye nokusebenza kwale mini yePodPod kunomdla ngakumbi ngexabiso le- € 99 kune- € 329 ebiza ixabiso langaphambili lePod Home. Ngokucacileyo inamandla asezantsi kunye nomgangatho ophantsi wesandi, kodwa yanele uninzi lwabo bafuna isithethi esinegumbi lokuhlala okanye lokulala. Ungazithenga ezimbini kwaye uzidibanise kwi-stereo, kwaye usekude kwixabiso lePodPod enkulu.
Uncedo lwesibini kukuba luzalwe lunendlela ende yokuhamba ngePod Home. Oko kuthetha ukuba ayithwali yonke imbali yayo. Nangona benditshilo ngaphambili, baphantse bafana ngokusebenza, Imoto encinci yasekhaya yasungulwa kunye nokusebenza esele kusebenza, ke ngoko ayinayo iilebheli "zomncedisi osisimumu", "umda", "uvaliwe… Ukuba iPodPod yasekhaya iphumelele, kwaye ayisokuze iyilahle ngaphandle kophuculo.
Mhlawumbi kungcono ukuqala ekuqaleni
Isigqibo sokuthatha umhlala phantsi kwi-HomePod siyamangalisa, kodwa ukuba siyacinga ngaso, inokuba nengqondo yayo. I- $ 99 yasekhaya yePod mini ibonakalise ukuba kukho indawo eninzi yeApple kwintengiso yesithethi esihlakaniphile, hayi ngaphezulu nje kwe- € 300. Ukuhlaziya i-HomePod yasekuqaleni kunye nokuqalisa ukuyithengisa nge- € 200 iya kuba linyathelo abantu abaninzi abangayiqondiyo, kwaye ayinangqondo ukuphehlelela isithethi esine-smart esinomgangatho ofanayo wesandi kunye neempawu ezingcono ngexabiso eliphantsi, ukugcina i-HomePod ikhathalogu. Okwangoku, kwaye emva kokuba i-HomePod mini ibonakalisile ukuba isicwangciso sokuqala seKhayaPod besingalunganga, kungangcono ukuqala ekuqaleni.
Ngapha koko, musa ukukhalisa ii-alamu: i-HomePod iya kuqhubeka nokufumana inkxaso kwi-Apple ngohlaziyo lwesoftware. Ngapha koko, kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo, ifumene amandla okunxibelelana neApple TV ukwenza iTheatre yakho yasekhaya, engenakukwazi ukuyenza iPodPod mini. I-HomePod iyakuyeka ukuthengisa, kodwa isenobomi obuninzi phambi kwayo, kwaye kuthi kuthi abo baneeyure ezininzi zomculo siyonwabele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » U-Apple uthi ndlela-ntle kwiPodPod yasekhaya
Iifoto ezintsha ze-AirPods zexesha elizayo 3 ziyavuza
IOS 14.5 iya kunika ukubalasela ngakumbi kwimisebenzi yokuThulisa iiFowuni ezingaziwayo